सरकारी कर्मचारीलाई दसैंमा भत्ता वितरण गर्न करिब साढे छ अर्ब रुपैयाँ निकासा……(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – दैनिक खबर
सरकारी कर्मचारीलाई दसैंमा भत्ता वितरण गर्न करिब साढे छ अर्ब रुपैयाँ निकासा……(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
October 1, 2018 Livenepal	Comment(0)
काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीलाई दसैंमा भत्ता वितरण गर्न करिब साढे छ अर्ब रुपैयाँ निकासा हुने भएको छ। दसैं भत्ताका लागि सरकारी कर्मचारीले नियमित तलब बराबरको एक महिनाको थप तलब पाउनेछन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ शर्माले निकासा हुने यो रकम घटस्थापना अगाडि वितरण गरिने जानकारी दिएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। उनले भने, ‘एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्नेछ।’
दसैंभत्ता र नियमित तलब गरी सरकारले कर्मचारीलाई दसैंमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि वार्षिक ८४ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च छुट्टयाएको छ।
यसरी सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि पारि श्रमिक तथा भत्तासहित कुल एक खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। हाल विभिन्न क्षेत्र, तह र अवकाश प्राप्त गरी करिब पाँच लाख ५६ हजारलाई दसैंपेस्की जाने गरेको छ। तीमध्ये निजामती कर्मचारी ८६ हजार, सैनिक करिब ९० हजार, सशस्त्र प्रहरी ३५ हजार र नेपाल प्रहरी करिब ६५ हजारको संख्यामा छन्।
निजामती र सुरक्षाकर्मीबाहेक शिक्षक, करारका कर्मचारी र पेन्सनधारीलाई पनि सरकारले चाडबाड खर्च शीर्षकमा एक महिनाको अतिरिक्त रकम भुक्तानी दिन्छ। हाल शिक्षक करिब डेढ लाख छन् भने पेन्सनधारी करिब एक लाख जना छन्।
त्यसबाहेक निजामती सेवाको करारमा करिब २२ हजार कर्मचारी छन्। स्थानीय तहतर्फ झण्डै आठ हजार कार्यरत छन्। चाडवाड शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक नभएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी बताउँछन्।
यद्यपि, बजेटमा चाडपर्वका लागि १३ महिनाको तलबका रूपमा यसलाई समेटिएको उनले बताए। सो भत्ता सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारी, शिक्षकले पाउने अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन्।
अघिल्लो महिना करारको अवधि निरन्तर ६ महिनासम्म पुगेका कर्मचारीलाई समेत चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ। उनले भनिन्, ‘एक वर्षमा ६ महिनाको करार अवधि पुगेको छ भने पनि चाडपर्व दिने व्यवस्थाछ।’
दसैंतिहार मात्र नभई अन्य चाडको हकमा पनि उक्त भत्ता लिन पाइने पौडेलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हिन्दु धर्मावलम्बी बाहेकका कर्मचारीहरुले पनि आ–आफ्नो मुख्य चाडपर्वका अवसरमा भत्ता लिन पाइने उनको भनाइ छ।
‘यो दसैंलाई मात्र नभई सबै चाडपर्वका लागि दिइने खर्च हो,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीले वर्षमा १३ महिनाको तलब पाउने हो। सामान्यतयाः हिन्दूहरूको चाड दसैंको घटस्थापनामा सबैलाई समेट्ने गरी चाडपर्व भत्ता दिने चलन छ।
तर ईद, क्रिसमसलगायत चाडपर्व मनाउने कर्मचारीले दसैंको सट्टा आफ्नो सम्बन्धित चाडपर्वमा उक्त भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ।’ संघीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन र अध्ययन गर्न एउटा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
तलब नबढाए पनि सान्त्वनास्वरूप उनले सरकारी कर्मचारीको मासिक महँगीभत्ता भने बढाएर दुई हजार रुपैयाँ बनाउने जनाएका छन्। निजामती एवम् स्वास्थ्य सेवामा भएका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पाउँदै आएको पोसाक सुविधाबापत पाउने रकम बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ।
विराटनगर, १७ असोज (रासस)ः जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आउदो दशैँ, तिहार, म्हँ पूजा, छठपर्व सर्वसाधारण जनताले हर्षोउल्लास रुपमा मनाउने वातावरण बनाउनका लागि विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाउने भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित समुदायसँग चिया कार्यक्रमको आयोजना गरी चाडपर्वको बेला धेरै भीडभाड हुने स्थानमा सादा पोशाकमा प्रहरी खटाउनुका साथै पैदल र साइकल […]
प्रधानसेनापतिले दिए अहिलेसम्मकै खतरनाक प्रतिक्रिया, दिए यस्तो खतराको चेतावनी, अब नेपालमा के होला? (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
काठमाडौं। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेको विश्लेषण गर्दै राजनीतिबाट समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन्। भदौ २४ गते जङ्गी अड्डामा पदभार सम्हालेपछि सकलदर्जालाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्वादबाहेक राज्यसँग अन्य विकल्प नरहेको चेतावनी दिए। सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहँदा उनको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो। प्रधानसेनापति थापाले २४ भदौमा गरेको सम्बोधनको […]
गृहमन्त्री बादलले नै गरे सरकार घेरामा पर्नुको कारणको खुलासा, यस्तो भने विराटनगरबाट बादलले (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्
काठमाडौं । गहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले नै आफूहरु घेरामा परेको बताएका छन् । उनले विराटनगरमा पत्रकारहरुसाग कुरा गर्दै आफ्नो सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले सरकार विभिन्न शक्तिहरूले घेराबन्दीमा परेको बताएका हुन् । गृहमन्त्री थापाले भने, सरकारले राम्रो काम नगरेको भए घेरा बन्दी नहुने र राम्रो काम गरेकाले नै सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भएको दावी […]
दुई नेपाली दाजुभाई कतारको एक कम्पनीले गर्यो ठुलो सम्मान…….(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)